More Comments on Hanky-Panky – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
More Comments on Hanky-Panky
ကျွန်တော့်ရဲ့ “ဆီအလူးကောင်းသူများ”နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Eleven Media ရဲ့ Website မှာ comment တွေ ထပ်တက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကွန်မန့် အမှတ်စဉ် ၃၆ က အရင်ကွန်မန့်ဟောင်းတွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်ပါလိမ့်ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို ၀ါကျတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ မေးထားတာဖြစ်တာမို့ ချန်လှပ်ခဲ့သလို ကွန်မန့်အမှတ်စဉ် ၃၇ က Payseeh ဆိုသူ ရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်ရယ်၊ အမှတ်စဉ် ၁၉ မှ ၂၅ အထိ Thiha Thit ဆိုသူ ရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်များရယ်ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သည်ဘလော့(ဂ်)က “ဆီအလူးကောင်းသူများ”ဆောင်းပါးအဆုံးမှာ သည်၏မလွဲ လာရေးသွားပြီးဖြစ်တာမို့ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကွန်မန့်တွေ များလာတဲ့အခါမှာတော့ သည်ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရုပ်လုံးက အတော်လေး ပီပြင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် သည်လို ရေးဖို့ လို မလိုဆိုတာလည်း သည်ကွန်မန့်တွေနဲ့တင် ထင်ရှားလို့နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘလော့(ဂ်)မှာ လာရေးသွားတာ မဟုတ်လင့်ကစား ကွန်မန့်ရေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ကြောင်း ထပ်လောင်း အစီရင်ခံပါရစေ။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် မေလ ၁၄ ရက်
(သတိထားပေးတော်မူကြရန် – သည်စာအတွက်လည်းကောင်း၊ ဆီအလူးကောင်းသူများအတွက်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသလို အဆုံးသတ်မှာ ကျွန်တော့် အမည်ကို ရေးသားရာမှာ “ဆူဒိုနင်”လို့သာ ရေးသားတာကို သတိချပ်စေလိုပါတယ်။ အတ္တကျော်နဲ့ ဆူဒိုနင်ဟာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လင့်ကစား စရိုက်ချင်း မတူပါဘူး။ ကွဲပြားပုံကို သိလိုပါက သည်ဘလော့(ခ်)ထဲကပဲ “ဆူဒိုနင်အလိုရှိသည်”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆရာမင်းလူ ရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို ဖတ်ရှုတော်မူကြပါခင်ဗျား။)
#26 lau lau 2010-05-09 09:51
in fact, immigration officer can not demand the passenger to show the money but for myanmar travelers are exceptional case bcoz of country back ground. agreed with MAI staff’s overriding or unprofessional act as I also stepped in at YGN airport bet 1 primary student and MAI counter staff abt 1hr dispute. finally he could board on plane and reached Changi without rejection frm SG immigration.
#27 SOL15 2010-05-10 07:54
[quote name=”pseudonym”]ကွန်မန့်ပေးကြသူများ အားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သို့သော် ကွန်မန့်ရေးသူများ မျက်စိလျှမ်းသွားတာလား၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ကြတာလားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော့် မူရင်းဆောင်းပါးထဲမှာ ခရီးတစ်ထောက်နား (transit) ပြည်ဝင်ခွင့်လည်း ပါနေပါတယ်၊ အဲဒီ့အတွက် ဘာ ပိုက်ဆံမှ ပြစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကလေးကိုကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ ထည့်မရေးကြတာလဲ မသိဘူးနော်။ )))))
ဒီ transit visa ကိစ္စမှာတော့ MAI ဝန်ထမ်းရဲ့ လုပ်ငန်း မကျွမ်းကျင်မှုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ချက်ကင်ကောင်တာမှာ သွားရောက်မယ့် နိုင်ငံပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လိုအပ်ခဲ့ရင် show money တောင်းရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် transit သွားမယ့် ခရီးသည်ကိုတော့ မေးရိုးမေးစဉ် မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ passport ကိုတော့ တချို့နိုင်ငံတွေရဲU (လဝက)က show money တောင်းပြီး ကြည့်တာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
#28 SOL15 2010-05-10 08:03
ဆရာ့ရဲ့ဆောင်းပါးအရ စာအုပ်ကို လှန်ကြည့်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ မြန်မာ passport တွေကိုသာ အများဆုံး ကြည့်ရတဲ့အတွက် တကယ်ဆိုရင် ဗီဇာက လွဲပြီး ကျန်စာမျက်နာတွေကို လှန်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ကျနော့်အတွေ့အကြုံမှာတော့ passport ပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်ခဲ့ရင် စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ တံဆိပ်တုံးတွေကို ကြည့်ဖို့အတွက်နဲ့ အဝင်အထွက် ရှိဘူးလားဆိုတာကို ကြည့်ဖို့ လှန်ကြည့်လေ့ ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်က လေကြောင်းဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းတော့ ကျနော့်Facebook ပေါ်မှာ ဒီနေ့ အားရင် ရေးပါအုံးမယ်။
#29 lwaneainthu 2010-05-10 16:06
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နာမည်လေးတစ်ခုတော့ ပေးချင်ပါတယ်။ အစ ဆွဲထုတ်သူများလို့ နာမည်ပေးချင်ပါတယ်…
အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ ဆူဒိုနင်ကလည်း သူသိတာပဲ သူပြောတာလေ။ လူဆိုတာက ကိုယ်သိတာပဲ ကိုယ်ပြောတာပဲ။ ဆူဒိုနင်ကတော့ ဒီမှာ ဇာတ်လိုက်ပေါ့။ အစ ဆွဲထုတ်လိုက်တာပဲ။ ဆူဒိုနင်က အမှား ရေးလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အမှန်ဆိုတာကတော့ ပေါ်ပေါက်လာတာပဲ။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ Rules and Regulations, Carrier service မှာလည်း Terms and Conditions ဆိုတာ ရှိတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် Airlines မှာလည်း လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်တွေတော့ရှိကြပါတယ်။
ဒီလို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ချေပခွင့်လေး ရှိတာပဲ တော်တော်လေး ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
#30 ttcg 2010-05-10 23:13
ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ အဆင်မပြေတာလေးတွေ တင်ပြပါမယ်။ ဒီပေါ်မှာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် သိတဲ့လူတွေ ရှိတော့ ရှင်းပြလို့ ရရင် ရှင်းပြပေးပါလား… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
#31 ttcg 2010-05-10 23:14
၁။ ၂၀၀၇ ဇူလိုင်တုန်းက ကျွန်တော် စင်ကာပူကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျောင်းသွားတက်ရပါတယ်။ IPA Letter ရပြီးရင် စင်ကာပူကို ဗီဇာဝင်စရာ မလိုဘဲ သွားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံး အခေါက်ဆိုတော့လည်း ရစ်မှာ ကြောက်တာနဲ့ စင်ကာပူသံရုံးမာသွားလျှောက်တော့ Student Visa ရခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ထင်ထားသလိုပါပဲ၊ လေယာဉ်ကွင်းရောက်တော့ အရစ်ခံရတော့တာပေါ့။ ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်း အထဲကို ၀င်သွားရင် အောက်ထပ်နဲ့ အပေါ်ထပ် ဆိုပြီးတော့ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လို ခေါ်လဲတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။ အောက်ထပ်က အိတ်ချိန်တဲ့နေရာမှာ ပြဿနာတက်တာပါ။ ဗီဇာကြီး တစ်ခုလုံး ပါတဲ့ဟာကို ဘာလို့သွားမှာလဲတဲ့။ (Student Visa ပါဆို စာပဲ မဖတ်တတ်တာလား မသိဘူး) ကျောင်းသွားတက်မှာလို့ ပြောတော့ ဘယ်ကျောင်း သွားတက်မှာလဲတဲ့။ NUS ဆိုတော့ ကျောင်းခေါ်စာပြပါတဲ့။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ၊ စလုံးသံရုံးက ခွင့်ပြုလို့ Student Visa တောင် ရပြီးပြီ။ သူတို့က စလုံး Immigration ကျနေတာပဲ။ ဒါနဲ့ IPA Letter ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ၊ သူတို့ကို မိတ်တူပေးခဲ့ပါတဲ့။ ဘာလုပ်ဖို့လဲဗျာ IPA Letter only နဲ့တင် စလုံးကို သွားလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့သွားလို့ အဲ့ဒီလိုတောင်းရင် လက်ခံလို့ရပါသေးတယ်…
#32 ttcg 2010-05-10 23:14
ကံကောင်းချင်တော့ကျွန်တော်ကလည်း အပိုဆွဲသွားပေလို့ပဲ။ အဲ့ဒါ ပေးခဲ့မှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ ဒီကြားထဲ ဘေးက ဘာတွေမှန်းမသိတဲ့လူတွေကလည်း ညီလေး အစ်ကိုကြီး ကူပေးရမလားက တစ်မျိုး။ အဆင်မပြေတာ ရှိရင် ပြောနော် အစ်ကို ကူညီပေးမယ်ဆိုတာက တစ်ဖုံ၊ ကျွန်တော်ပဲ ကံဆိုးတာလား။ သူတို့ အချင်းချင်း လက်ဝါးရိုက်ထားသလားတောင် သံသယ ၀င်မိတယ်။ ဒီထဲက လူတွေ ပြောသလို ကျွန်တော်ပဲ လေကြောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Procedures တွေကို နားမလည်တာလားဆိုတာ ဒီထဲက တတ်သိနားလည်တဲ့လူတွေ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
#33 ttcg 2010-05-10 23:15
၂။ ၂၀၀၉ သြဂုတ်လထဲမှာ မြန်မာကနေ စလုံးကို ပြန်ထွက်တော့ အရစ်ခံရတာပါ။ ဒီတစ်ခါက အပေါ်ကကောင်တာမှာ ဖြစ်တာပါ။ ပါ့စ်ပို့ကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့် နဲ့ PR card ပေးပါဆိုတော့ ဒီမှာ ဆိုပြီးတော့ ပြလိုက်တော့ ok ok ဆိုပြီးတော့ ပြန်ထွက်ခါနီးကျမှ နောက်က UK Student Visa ကို တွေ့သွားပြီးတော့ ဒီဗီဇာက ဘယ်တုန်းက ရထားတာလဲတဲ့… (Date ကြီးပါနေတဲ့ဟာကို)။ UK ကို သွားတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ရောတဲ့။ ကျွန်တော် မ၀ယ်ရသေးဘူး၊ စလုံးရောက်မှ ၀ယ်မှာလို့ (အမှန်က Eticket ၀ယ်ပြီးပါပြီ… ဇယားရှုပ်လို့ အဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တာ) UK Student Visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟာတွေပြပါတဲ့။ ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ… အမှန်တကယ်လည်း ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ မပါလာဘူး။ စလုံးက အိမ်မှာ အကုန်ထားခဲ့တာ။ အဲ့ဒါ မပါဘူး အခုသွားမှာက စလုံးလေလို့။ ဒီမှာက PR Card စလုံးကို အချိန်မရွေး ၀င်လို့ရတယ်။ UK သွားမှာမှ မဟုတ်တာ။ အဲ့ဒါတွေလိုလို့လားဆိုပြီး ပြန်မေးတော့မှ အစ်မတို့က ထုံးစံအရ မေးတာပါတဲ့။ ရပြီ၊ ရပြီ၊ သွားတော့ ဆိုပြီးတော့ လွှတ်လိုက်တော့တယ်။ အဲ့ဒီထုံးစံကိုလည်း ရှင်းပြပေးကြပါဦး။
#34 SOL15 2010-05-11 06:43
ကျနော်က ဘယ်လေကြောင်းနဲ့မှ မပတ်သက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကျနော် သိသလောက် ဖြေ တာပါ။
၂၀၀၇ ကိစ္စမှာတော့ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းနားမလည်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီစာရွက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အတွေ့အကြုံ မရှိတာ (သို့) ရန်ကုန် Airport က Station ကိုက ဒီလို လုပ်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားချက် ရှိလို့ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ လုပ်ဟန် တူပါတယ်။
တကယ်တန်းဆိုရင်တော့ဗီဇာနဲ့ IPA Letter ရှိရင် one way ticket နဲ့တင် ဝင်လို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ စာရွက်စာတမ်းတွေဆိုရင်တော့ မိတ္တူ ယူထားလေ့ ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်ကတော့ မြန်မာလဝကများ ကောင်တာပါ။ တကယ်တန်းဆိုရင်တော့ စလုံး IC ကို သူတို့ တောင်းစစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဗီဇာကိုလည်း သူတို့ ကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။
သို့သော် ဒါက မြန်မာပြည်ထုံးစံ ဖြစ်နေတော့ သူတို့တောင်းသမျှ ပေး၊ မေးသမျှ ဖြေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ ။ မြန်မာလဝကက မေးရင် ပြောပါတယ်။ ကျနော့်တုံးက ဆိုလည်း ကြုံဖူးပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့လို အမေးအမြန်းနဲ့ စာအုပ်တစ်ခုလုံး စစ်ဆေးတာတွေ…
+3 #35 humanity 2010-05-11 14:01
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို အကောင်းဘက်က ရေးသားတာမျိုးက ပိုသင့်တော်ပါတယ် ဆရာဆူဒိုနင်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဆရာကိုယ်တိုင်လဲ ၊ ဆီလူးသလိုများ၊ ဖြစ်နေမလားလို့ပဲ။
#38 mtk20100 2010-05-14 00:56
ဆောင်းပါးရှင် ရေးထားတာတွေ၊ comments တွေ ဖတ်ပြီး ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတာတွေကို လေကြောင်းလိုင်းက ၀န်ထမ်းတွေကို မေးချင်ပါတယ်။
(၁) show money ပါလားလို့ မေးရအောင် ကျနော်တို့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ နိုင်ငံခြားငွေ တရားဝင် ကိုင်ဆောင်၊ သယ်ဆောင်ခွင့် ရှိလို့လား?
(၂) ပြည်ဝင်ခွင့် (visa) ဆိုတာကို ရရှိဖို့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ immigration တွေ၊ သံရုံးတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက် အပြည့်အစုံကို စုံလင်စွာ တင်ပြပြီးမှ ရခဲ့တာမို့ Visa ရရှိပြီးသားသူတွေကို စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်တွေ ထပ်မံ တောင်းဆိုဖို့ လိုအပ်သလား?
(၃) visa ရရှိပြီးသား ခရီးသည်တစ်ယောက်ကို check-in လုပ်တဲ့အချိန်မှာ visa နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို မတင်ပြနိုင်ရုံနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းက ၀န်ထမ်းက လေယာဉ်စီးဖို့ တာ:ပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ? (visa apply လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း တင်ပြထားပြီးသား) လိုအပ်သလို မေးမြန်းခွင့် ရှိတာ နားလည်ပါတယ်။ လေယာဉ်စီးဖို့ တားဆီးခွင့် ရှိမရှိဆိုတာကို မေးတာပါ ။
#39 mtk20100 2010-05-14 00:58
(၄) လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းခိုင်လုံမှု မရှိဘဲ လေယာဉ်စီးဖို့ တားဆီးခြင်း ခံရတဲ့ ခရီးသည်အနေနဲ့ နစ်နာဆုံရှုံးမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ကြား နိုင်မနိုင်၊ တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိမရှိ? (အထက်ပါ နံပါတ် ၄ မေးခွန်းကို မဖြေချင်ရင်လည်း ရပါတယ်၊)
(၅) ခရီးသည်တစ်ယောက်ကို မစစ်ဆေးဘဲ တင်ပေးလိုက်လို့ ပြည်ဝင်ခွင့် ငြင်းဆန်ခံရရင် လေကြောင်းလိုင်းက အလျော်အစား ပြဿနာ ရှိတယ်လို့ Comment တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ တကယ်လို့ Visa ရရှိပြီးသား ဖြစ်လို့ တင်ပေးလိုက်တဲ့ ခရီးသည် ငြင်းဆန်ခံရရင်ကော? အလျော်အစားဆိုတာ ရှိလား?
(၆) နောက်တစ်ခုက လေယာဉ်စီးတဲ့ ခရီးသည်တွေကို ပညာပေးတဲ့အပိုင်းပါ။ လေကြောင်းလိုင်း company တွေအနေနဲ့ ခရီးသည်တစ်ယောက် လေယာဉ်မစီးခင် လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ကတည်းက ဘာတွေ လိုအပ်တယ်၊ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်လာရမယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များကို လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ကတည်းက ခရီးသည်များကို ကြိုကြိုတင်တင် အသိပေးမှုတွေ လုပ်ပေးခဲ့သလား? သိသင့်တဲ့ အချက်အလက် (information) တွေကို ဘယ် websites၊ ဘယ် လေဆိပ် ကောင်တာ၊ ဘယ် travel company၊ ဘယ် ticketing agent တွေဆီမှာ ရနိုင်မလဲ?
#40 mtk20100 2010-05-14 01:09
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ air line လုပ်ငန်းဆိုတာ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းပါ။ အဲဒီမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ၀န်ထမ်းအားလုံး customer တွေရဲ့ အသံကို နားထောင်တတ်ရတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်အနေနဲ့ အကောင်းဘက်က ရေးရေး၊ အဆိုးဘက်က ရေးရေး… ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို လူတွေ ဖတ်ကြတယ်။ ဖတ်မှ သိမှာ။ သိမှ ဘာတွေ လိုအပ်လဲဆိုတာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ။ အဲဒီအတွက် ဆောင်းပါးရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကျနော်တို့ ခရီးသည်တွေဘက်ကလည်း လိုအပ်တာ ပြင်ဆင်လာဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်သလို၊ ၀န်ဆောင်မှု ပေးတဲ့သူတွေဘက်ကလည်း လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
#41 ttcg 2010-05-14 04:14
အခုလို ပြန်ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ… အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ… သူတို့က မဆိုင်ဘဲနဲ့ အရမ်းရစ်ကြတာပဲ…
မြန်မာနိုင်ငံက အစိုးရရုံး တော်တော်များများမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ… အဲ့ဒီ စစ်စတမ်ကြီးကို ပြင်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ
Author lettwebawPosted on 14 May 2010 14 May 2010 Categories Uncategorized
3 thoughts on “More Comments on Hanky-Panky”
16 May 2010 at 9:50 pm
ဒီလို ဆောင်းပါးမျိုးတွေ အများပြည်သူဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……ဝန်ထမ်းတော်တော်များများရဲ့ အခြေခံ Mindset ကိုက ဒီနေရာမှာမှားနေတာပါ…သူတို့ရဲ့တာဝန်က ခရီးသည်တွေကို အနှောက်အယှက်ပေးဖို့ စစ်ဆေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး..ခရီးသည်တွေချောမွေ့အဆင်ပြေအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာ သူတို့တာဝန်ပါ….မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းတွေကော လဝကတွေကော ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေအပေါ်မှာ ထိုက်သင့်တဲ့ စေတနာလေး ထားနိုင်ကြရင်ဖြင့် ..
1 June 2010 at 11:15 pm
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ http://lettwebaw.mylovecafe.com/ ဒီအကောင့်ကနေ ဖတ်လို့မရဘူး….။ ဘာဖြစ်လို့လည်း မသိဘူး…။ အဲဒါနဲ့ မေးလ်ထဲက ပြန်ကြည့်ပြီး ဒီအကောင့်ကို ၀င်ဖတ်မိတယ်….။ Comment ရေးချင်စိတ်တွေ ပေါက်တာနဲ့ ထပ်ရေးလိုက်တယ်…။ Comment ရေးထားတဲ့ သူတွေကလည်း တော်တော် အရေးကောင်းကြတာပဲ…။ စဉ်းစားမိတယ်.. ဒီလို ဖော်ပြခွင့် ရတဲ့သူတွေတောင် ဒီလောက်များနေတာ…။ ဒီလို ရေးခွင့် မရတဲ့ သူများ….ကြုံကြရတဲ့ သူများ ရှိနေမှာကို…..တွေးမိတာနဲ့ ဘုရားတမိတယ်…။ တော်တော်……..အားကိုးရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပဲ….။
4 June 2010 at 8:34 pm
http://mylovecafe.com ကိုပါ လုံးဝ ၀င်လို့ မရတော့ဘူးဗျ။ ဘုရားခေါ်သွားပြီနဲ့ တူတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရံလေး လုပ်ထားတာပါ။ အခု နောက်ထပ် အရံတစ်ခု လုပ်ရမယ့် သဘောရှိနေပြန်ပါရောလားခင်ဗျာ။
Previous Previous post: The Day I BecameaMom
Next Next post: How to Love Somebody Thoughtfully